(1996-01-04)January 4, 1996
Michigan Stars (USA)
Tatenda Mukuruva is a Zimbabwean professional footballer who played for Dynamos Football Club as a goalkeeper. He became one of the youngest goalkeepers to play for the Dynamos senior team in the Zimbabwe Premier Soccer League. Mukuruva did his ‘A’ level studies at Prince Edward School  He joined Michigan Stars in 2019 where he is playing his football after leaving Buildcon of Zambia.
Mukuruva represented Zimbabwe’s Young Warriors Under 23 against Morocco in November 2014. He has also featured for the senior national side under the guidance of former Dembare gaffer, Callisto Pasuwa. He was part of the history making under 23 side that made history by qualifying for the All Africa Games for the first time since the nation hosted the games in 1995.
Zimbabwe Premier Soccer League winner (2014 with Dynamos Football Club
Best Goalkeeper at the 2014 Hammer and Tongues School Tournament.
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Tatenda_Mukuruva&oldid=91037"
This page was last edited on 7 August 2020, at 08:06.